Iikhosi ezili-11 eziphezulu zokuFundisa i-Intanethi eMzantsi Afrika 2022
Iikhosi ezili-11 eziphezulu zokuFundisa i-Intanethi eMzantsi Afrika
Kukho iikhosi zokufundisa nge-Intanethi eMzantsi Afrika onokuthi uzithathe njengomsebenzi wesingxungxo ukuze ufumane umvuzo owongezelelweyo kwaye uziqhelanise nezakhono zakho zokufundisa.
Imfundo ekwi-Intanethi nakwimigama ayiseyonto intsha, ayikhange ikhawuleze yamkelwe ngamanye amaziko kodwa ukuqhambuka kweCovid-19 kwanyanzela zonke izikolo ukuba ziyamkele. Babengenandlela yokuzikhethela njengoko ubomi kufuneka buqhubekeke nangona ubhubhane usekho ngokubanzi. Kwaye ngenxa yalo mbandela, ukufunda nge-Intanethi kunye nokufunda umgama kufuneka kunyanzeliswe ngurhulumente wamanye amazwe kunye nebhodi yezemfundo yamaziko.
Imfundo ekwi-Intanethi ngokuqinisekileyo inezinto zayo xa kuthelekiswa nendlela yemveli yokufundisa kunye nokufunda, iyaguquguquka, iphantsi koxinzelelo, unokukhetha ukuba uza kufunda phi, kulungile, kwaye uya kufunda ngcono njengoko kungayi kubakho ziphazamiso kwabo ufunda nabo kwaye nangokunjalo. Ezi zibonelelo zikwasebenza ekufundiseni kwi-Intanethi.
Endaweni yokutsiba isuti kwaye ubophe rhoqo emva kweveki uye emsebenzini, unokuphosa iimpahla zekhaya rhoqo, uhlale phambi kwekhompyuter yakho, ufundise abafundi, kwaye wenze imali. Njengotitshala, ubaleka noxinzelelo lokuya esikolweni yonke imihla kwaye uye wonwabe ngokulula okuza nokusebenza ekhaya.
Ukufundisa ngumsebenzi owonwabisayo nonika umdla kwabo bawuthandayo, ngaphandle kwento ekwenza ufune ukuthatha umsebenzi okanye ungenise umgca wobugcisa ongawuthandiyo, sisiqalo soxinzelelo kuwe.
Nangona kunjalo, ukuba ukufundisa kuyabhenela kuwe kwaye ufuna ukukhaba ukuqala umsebenzi wobuchwephesha, kuya kufuneka ufake isicelo kwikholeji yasekuhlaleni yeminyaka emibini okanye kwikholeji yemfundo kwaye wenze idigri yokufundisa, idiploma, okanye isatifikethi. Kodwa ukuba ufuna ukwandisa amathuba akho okuba uqeshwe ngentlawulo ephezulu, kuya kufuneka ulandele isidanga sebhatshela okanye iinkosi kwinkqubo yokufundisa.
Kananjalo, njengokufundisa abafundi kwi-intanethi kunye nezifundo zokufunda zabafundi kunye nokugqibezela iinkqubo kwi-intanethi, abantu abafuna ukungena kwizifundo zokufundisa banokuthatha ngokulinganayo izifundo zokufundisa kwi-Intanethi ukugqibezela isidanga abasilandelayo. Ke, unokufunda isidanga sakho sokufundisa ngaphandle kweintanethi (ngokwesiko) okanye ngezifundo ezikwi-Intanethi, ungakhathazeki, izidanga ezihlanganisiweyo ziyafana.
Iikhosi zokufundisa ezikwi-Intanethi zisebenzela abantu abafuna nje ukufumana isidanga ekufundiseni nakwabo sele befumene isidanga. Kulabo sele befumene isidanga kwaye sele besebenza njengootitshala, ukubhalisa kwiklasi yokufundisa kwi-Intanethi kungapolisha izakhono zabo esele zikho, babafundise iindlela zokufundisa zangoku nezibhetele abanokuthi bazenze ukuze bafundise ngokufanelekileyo, kwaye babenze babe ziingcali ngakumbi.
Nangona eli nqaku likwiikhosi zokufundisa ezikwi-Intanethi eMzantsi Afrika, ezi ngxoxo zingasentla zisebenzela wonke umntu. Ukuba awukho eMzantsi Afrika kwaye ufuna ukujoyina iikhosi ezi-intanethi, nxibelelana nesikolo esibonelela ngenkqubo yokuqinisekisa ukuba bayabamkela na abantu bamanye amazwe kule nkqubo. Ukuba abayamkeli, khangela nje iikhosi zokufundisa nge-intanethi kwilizwe lakho usebenzisa uGoogle, kwisithuba esingaphantsi kwemizuzu emihlanu, uya kufumana zonke iimpendulo ozifunayo kwiwebhu.
Ngelixa ufundela isidanga sakho sokufundisa unokuzibandakanya ekufundiseni abafundi kwi-Intanethi ukuze uziphuhlise kwaye ube ngcono kwinto oyenzayo. Kule mihla, maninzi amaqonga okufundisa kwi-Intanethi apho ungaqala khona uhambo lwakho lokufundisa kwaye ufumane imali ngelixa usenza. Yabona, awuphulukani nanto.
EMzantsi Afrika, zingaphezulu kwama-25,000 izikolo zikarhulumente, kwaye bangaphezulu kwama-400,000 ootitshala abaqeshwayo abafumana i-R210,000 ukuya kwi-R618,000 ngonyaka. Ootitshala abanesidanga seminyaka emine kunye ne-REQV 14 bafumana eyona mali iphakathi phakathi kwe-R278,000 ukuya kwi-R618,000, ngelixa ootitshala abakwi-REQV 13 befumana umvuzo ophantsi phakathi kwe-R210,000 ukuya kwi-R465,000.
1 Yintoni iKhosi yokuFundisa e-Intanethi eMzantsi Afrika
2 Ngubani onokufaka iKhosi yokuFundisa kwi-Intanethi eMzantsi Afrika
3 Izidingo zokufaka isicelo seekhosi zokufundisa ezikwi-Intanethi eMzantsi Afrika
4 Iikhosi ezifundisa nge-Intanethi eMzantsi Afrika
4.1 1. Imfundo yabo Bonke: Ukukhubazeka, ukwahluka, kunye nokubandakanywa
4.2 2. ISatifikethi esiPhambili kuFundo lweSigaba seSiseko
4.3 3. ISatifikethi esiPhambili kuFundo lweSigaba esiPhakathi
4.4 4. ISatifikethi esiPhucukileyo kwiSigaba esiPhakamileyo ukuFundisa uLwimi lokuQala oloNgezelelweyo
4.5 5. Iziseko zokufundisa kuPhuhliso lwaBantwana aBasaqalayo
4.6 6. Izakhono zokuCebisa ooTitshala
4.7 7. Edtech eklasini
4.8 8. IZiseko zokuFunda iBakala R
4.9 9. Funda ukufundisa kwi-Intanethi
4.10 10. Ukufundisa ngenkxaso yokuFunda ngokuLungisa
4.11 11. IDiploma kaZwelonke kuPhuhliso lwaBantwana aBasaqalayo
5 I-FAQs kwiikhosi ezifundisa nge-Intanethi eMzantsi Afrika
Yintoni iKhosi yokuFundisa e-Intanethi eMzantsi Afrika
Ikhosi yokufundisa kwi-Intanethi eMzantsi Afrika yikhosi ethathwa ngabafundi abalandela isidanga kwicandelo lokufundisa ukwanelisa iimfuno zenkqubo. Ingathathwa kwakhona ngabo sele befumene isiqinisekiso sokufundisa kwaye sele beqeshwe ngokupheleleyo ootitshala ukuba bapolishe izakhono zabo kwaye bafunde iindlela ezintsha zokufundisa.
Ngubani onokufaka iKhosi yokuFundisa kwi-Intanethi eMzantsi Afrika
Abantu abanokufaka izicelo zeekhosi zokufundisa kwi-Intanethi eMzantsi Afrika ngabafundi abafuna ukuthatha umsebenzi wobutitshala kunye nabo sele bengabahlohli kodwa bekhangela amathuba okuxubusha kwizakhono zabo ezikhoyo.
Izidingo zokufaka isicelo seekhosi zokufundisa ezikwi-Intanethi eMzantsi Afrika
Imfuno yokufaka isicelo seekhosi zokufundisa kwi-Intanethi eMzantsi Afrika kukuba ubambe iSatifikethi seMatriki sikaZwelonke (NSC) ubuncinci i-50% kulwimi lokufundisa nokufunda kunye ne-40% ubuncinci kwimathematics okanye i-50% kulwazi lwemathematika.
Nangona kunjalo, ipesenti yokupasa eboniswe apha inokwahluka ngokwasesikolweni, kuba iikhosi zokufundisa ezikwi-Intanethi eMzantsi Afrika zifundiswa ngqo ziiyunivesithi, ke ngoko, ziyagqiba ukuba zeziphi na iimfuno. Ungahlala unxibelelana neziko lomamkeli ukuze ufunde ngakumbi malunga neemfuno zenkqubo ethile.
Iikhosi ezifundisa nge-Intanethi eMzantsi Afrika
Imfundo yabo Bonke: Ukukhubazeka, ukwahluka, kunye nokubandakanywa
ISatifikethi esiPhambili kuFundo lweSigaba seSiseko
ISatifikethi esiPhambili kuFundo lweSigaba esiPhakathi
ISatifikethi esiPhucukileyo kwiSigaba esiPhakamileyo ukuFundisa uLwimi lokuQala oloNgezelelweyo
Iziseko zokufundisa kuPhuhliso lwaBantwana aBasaqalayo
Izakhono zokuCebisa ooTitshala
EdTech kwigumbi lokufundela
Iziseko zokufundisa kwiBanga R
Funda ukufundisa kwi-Intanethi
Ukufundisa ngenkxaso yokufunda ngokuLungisa
IDiploma kaZwelonke kuPhuhliso lwaBantwana aBasaqalayo
1. Imfundo yabo Bonke: Ukukhubazeka, ukwahluka, kunye nokubandakanywa
Le yenye yeekhosi zokufundisa ezenziwa kwi-Intanethi eMzantsi Afrika kwaye zenziwa yiDyunivesithi yaseKapa ngeFutureLearn- iqonga lokufunda online. Le khosi yenzelwe ngokukodwa ootitshala, abazali, kunye neengcali ukubanceda bafumane ezinye iindlela kunye neendlela ezifanelekileyo zokwenza imfundo ibandakanye ngakumbi, ngakumbi kwiindawo apho izixhobo zinqongophele.
Ikhosi ziiveki ezi-6 ubude, i-100% kwi-intanethi kwaye uya kufunda ngesantya sakho, kwaye simahla kodwa ukuba ufuna izibonelelo ezongezelelweyo zixabisa i $ 49. Le khosi yeyokuba sele beziqhelanisa nootitshala kunye neengcali ukuba awuyigqibanga inkqubo yakho yesidanga sokufundisa kwaye awuzange uziqhelanise nokufundisa kuzo zonke ezinye iikhosi ezingezantsi kunokuba zezakho.
Faka isicelo apha
2. ISatifikethi esiPhambili kuFundo lweSigaba seSiseko
Le yenye yeekhosi zokufundisa ezikwi-Intanethi eMzantsi Afrika. Yipesenti ye-100% yenkqubo yesatifikethi esiqhubele phambili kwi-Intanethi yootitshala abafanelekileyo abanikwa yiDyunivesithi yaseFreyistata. Ukuziqhelanisa nootitshala abajonge ukuqhubela phambili nezakhono zabo zokufundisa akufuneki baphoswe leli thuba lokwenza njalo ngaphandle kokuyeka imisebenzi yabo esele ikho.
Le nkqubo ineeveki ezili-10 ubude kwaye ngelo xesha, ootitshala baya phambili kwinqanaba labo lokufumana impumelelo ngokwanda kolwazi, ukuzilolonga ekusombululeni iingxaki, kunye nokusetyenziswa okusebenzayo. Ngezakhono zakho ezisandula ukufunyanwa, ungaqala ukuzisebenzisa kwangoko kumagumbi okufundela kwaye ikwalungela ukuba unyuselwe okanye ufumane amathuba angcono emisebenzi.
3. ISatifikethi esiPhambili kuFundo lweSigaba esiPhakathi
Le yenye yeekhosi zokufundisa ezikwi-Intanethi eMzantsi Afrika ezifundiswa yiYunivesithi yaseFreyistata. Le nkqubo yinkqubela phambili ukusuka kule ingentla kwaye iyi-100% kwi-intanethi ngokunjalo, ke, ukuthatha inxaxheba, awudingi ukuhamba okanye ukuvela kwiseshoni yokunxibelelana. Akukho mviwo zisemthethweni nokuba, endaweni yoko, inkqubela phambili yabafundi ilinganiswa ngovavanyo olwenziwa kwi-Intanethi.
4. ISatifikethi esiPhucukileyo kwiSigaba esiPhakamileyo ukuFundisa uLwimi lokuQala oloNgezelelweyo
Le yenye yeekhosi zokufundisa ezenziwa kwi-Intanethi eMzantsi Afrika ezifundiswa yiYunivesithi yaseFreyistata. Inkqubo yeeveki ezili-10 ineemodyuli ezili-14 zizonke iikhredithi ezili-132 ekufuneka abafundi bazalise ukufumana isatifikethi esivunyiweyo.
Le nkqubo ijolise ekuxhobiseni ootitshala ngezixhobo eziyimfuneko ekufundiseni isiNgesi ngokufanelekileyo nokunxibelelana ngokufanelekileyo ngelixa kuphunyezwa ulwazi kunye netekhnoloji yonxibelelwano kwigumbi lokufundela. Ekupheleni kwenkqubo, uya kuphuhlisa ubuchule ekusebenziseni iindlela zokufundisa, unike ingxelo eyakhayo kubafundi, nangaphezulu.
5. Iziseko zokufundisa kuPhuhliso lwaBantwana aBasaqalayo
Le yenye yeekhosi zokufundisa ezikwi-Intanethi eMzantsi Afrika ezinikezelwa yiDamelin Online, le nkqubo yenzelwe ootitshala bezononophelo lwasemini, iingcali zokhathalelo lwabantwana, izifundiswa, abazali, kunye nabanonopheli babazisa kwiziseko zokhathalelo lwabantwana ngakumbi malunga nokuzalwa kweminyaka emi-4 yobudala beqela.
Inkqubo ineemodyuli ezili-10 kwaye ithatha iiveki ezili-10 ukuyigqiba, ekupheleni kwenkqubo, uya kufunda ukuba uza kufundisa ntoni kwaye ufumane njani ukuqonda okuqinisekileyo kwemigaqo-nkqubo, ithiyori, kunye neendlela zokufundisa nokuvavanya abantwana.
6. Izakhono zokuCebisa ooTitshala
Izakhono zokuCebisa ooTitshala yenye yeekhosi zokufundisa ezikwi-Intanethi eMzantsi Afrika ezibonelelwa nguDamelin Online. Ikhosi yi-100% kwi-intanethi eneemodyuli ezili-11, ezigqityiweyo kwiiveki ezili-11. Yikhosi yabasaqalayo eyenzelwe ootitshala kwizikolo eziziiprayimari nakwizikolo eziphakamileyo ukubanika izakhono kunye nokuqonda ukulungiselela ootitshala ukuba bazi ukuba bathumele nini abafundi okanye abazali ekunene kwiingcali zangaphandle.
7. Edtech eklasini
I-Edtech kwigumbi lokufundela likhosi ekufuneka wonke utitshala akhwele kuyo. Ixhobisa ootitshala ngezakhono kwiindlela ezintsha zokufundisa kunye nendlela yokusebenzisa ubuchwephesha obukhoyo ukuqhuba iklasi yokufundisa esebenzayo kunye nokunxibelelanisa abafundi. Ekupheleni kwekhosi, ukuzithemba kwakho ekufundiseni ngeetekhnoloji ezivelayo kunye nokuzibandakanya kwabafundi kwiindawo zokufunda ezintsha, ezinothungelwano kuya kuphucula kakhulu.
Le khosi inikezelwa kwi-Intanethi yiDamelin Online kwaye yenye yeekhosi zokufundisa ezenziwa kwi-Intanethi eMzantsi Afrika. Inemodyuli ezili-11 kwaye igqityiwe kwiiveki ezili-11.
8. IZiseko zokuFundisa iBakala R
Iziseko zokuFundisa iBanga R yenye yeekhosi eziphambili kwi-Intanethi eMzantsi Afrika, ineemodyuli ezili-10 kwaye zinokugqitywa kwiiveki ezili-10. Ukuba ufuna ukuqhuba iziko lakho lokukhathalela abantwana, le yikhosi ekufuneka ujonge kuyo ukuphucula izakhono zakho zolawulo kwindawo yophuhliso lwabantwana, uqonde imigaqo kunye nokuthotyelwa kwemithetho ekumiseni iziko lakho lokukhathalela abantwana, kwaye ufunde imigaqo-nkqubo ephambili kunye neenkqubo ezichaphazelekayo. ukubhalisela indawo yokugcina abantwana.
9. Funda ukufundisa kwi-Intanethi
Ukufundisa kwi-Intanethi akukho lula njengoko kusitshiwo, izinto ezininzi ziyadlala kwaye yahluke mpela kwindlela yokufundisa yesiko. Ezi zizakhono ekufuneka ubenazo njengotitshala ngeli xesha langoku apho imfundo ekwi-Intanethi ithandwa kwaye kuba uza kuthatha iklasi kwi-Intanethi, kuphantse kufane nokuba sele ufumana izakhono ezisebenzayo.
Le yenye yeekhosi zokufundisa ezikwi-Intanethi eMzantsi Afrika eziyilelwe ukukukhokela ekusebenziseni ulwazi lwemfundo osele uluqhelisela kwaye ulutshintshela kwindawo ekwi-intanethi. Oku kukuvumela ukuba ubambe iiklasi kunye nabafundi bakho naphina, nangaliphi na ixesha kwaye yile nto ikwayinkqubo yemfundo yanamhlanje.
10. Ukufundisa ngenkxaso yokuFunda ngokuLungisa
Le yenye yeekhosi zokufundisa ezikwi-Intanethi eMzantsi Afrika ukukhuthaza ulwazi, ulwazi, kunye nokuqonda phakathi kootitshala, abazali, kunye nabanonopheli malunga nemiba eyahlukeneyo yophuhliso, indlela yokuziphatha, kunye nokusingqongileyo ekufundeni kubuntwana, nakwinqanaba lesiseko.
Njengotitshala, le khosi iya kukunceda ufumane ukuqonda ngabafundi bakho kunye nendlela abanokuphembelela ngayo ukukhula kwabo.
11. IDiploma kaZwelonke kuPhuhliso lwaBantwana aBasaqalayo
Kuluhlu lwethu lokugqibela lweekhosi zokufundisa ezikwi-Intanethi eMzantsi Afrika yiDiploma yeSizwe kuPhuhliso lwaBantwana aBasaKhulu-inkqubo yeminyaka emibini. Inkqubo iyaqonda ukuba uqeqesho kwimfundo yabantwana abasaqalayo kunye nokusetyenziswa kwesicelo seMontessori kufuna ububanzi bokuqonda kunye neseti eyahlukeneyo yezakhono kunye nesimo sengqondo esithile ebantwaneni.
Xa ugqibezela le nkqubo yediploma, uya kusebenza njengomhlohli ophumelele ngokupheleleyo ebuntwaneni eMzantsi Afrika. Inkqubo inikezelwa kwi-Intanethi liziko leMontessori eMzantsi Afrika.
Ezi zezi zifundo ziphambili zokufundisa kwi-Intanethi eMzantsi Afrika kwaye ukuba kukho naziphi na zezi zifundo onomdla kuzo, cofa apha "Faka apha" ukuba uqalise.
I-FAQs kwiikhosi ezifundisa nge-Intanethi eMzantsi Afrika
Ngaba ndingafunda ukufundisa kwi-Intanethi eMzantsi Afrika?
Ewe ungafundela ukufundisa kwi-Intanethi eMzantsi Afrika kwaye unokukhetha kwi-11 yazo ezichaziweyo kwaye zaxoxwa kule posti yebhlog.
Zeziphi iziqinisekiso endizifunayo ukuze ndibe ngutitshala eMzantsi Afrika?
Ukuze ube ngutitshala oqeqeshekileyo eMzantsi Afrika, kufuneka ube usigqibile isidanga seminyaka emine sokuQala isiDanga sezeMfundo okanye esilingana naso kulandelwa isiDanga seDiploma sezeMfundo sonyaka omnye, kunye nokubhalisa kwiBhunga laBafundi laseMzantsi Afrika.
Kubiza malini ukuba ngutitshala eMzantsi Afrika?
Iindleko zokuba ngutitshala eMzantsi Afrika ziyahluka ukusuka kwisikolo ukuya kwesinye, njengoko kuya kufuneka wenze isidanga se-bachelor kwimfundo kodwa isusela kwi-R44,000 ukuya kwi-R87,000 kunyaka wokuqala.
Bafumana malini ootitshala eMzantsi Afrika?
Ootitshala eMzantsi Afrika bafumana umvuzo ophakathi we-R258,060 ngonyaka. Umndilili wemivuzo yokuqala katitshala woMzantsi Afrika yi-R182,500 ngonyaka kwaye eyona mivuzo iphezulu ingadlula kwi-R618,000 ngonyaka.
Zeziphi iititshala ezifunekayo eMzantsi Afrika?
Ootitshala abanobuchule bolwimi kwisigaba sesiseko kunye nootitshala bezibalo kuwo onke amanqanaba angaphantsi kweBanga le-10 bafuna kakhulu eMzantsi Afrika.
IiNyuvesi ezi-4 eziPhambili zeTekhnoloji eMzantsi Afrika
I-3 zeYunivesithi ezingabizi kakhulu eMzantsi Afrika zaBafundi beZizwe ngezizwe
Iikhosi ze-16 zasimahla ezikwi-Intanethi eMzantsi Afrika ezineZatifikethi
Ezona zixhobo ziBalulekileyo zaBafundi kwiMfundo ye-Intanethi
Iindlela ezili-15 zokufundisa isiNgesi kwi-Intanethi kuBafundi baseJapan ngeNzuzo
Iikhosi ze-17 zasimahla ezikwi-Intanethi zoPhuhliso lwaBasebenzi bootitshala
I-9 iiyunivesithi ezingabizi kakhulu eYurophu ezifundisa ngesiNgesi
Isidanga seMasters simahla sooTitshala
Uluhlu oluphezulu lwe-18 lweekhosi zoqeqesho lootitshala
izifundo zekhompyutha Funda iSakhono kwi-Intanethi Ukufunda kwelinye ilizwe kunye neScholarship funda kwi-intanethi
iikhosi zokufundisa nge-intanethi eMzantsi Afrika
Post Previous:Ngaba Umsebenzi we-ESOL wokuFundisa yeyona ndlela ilungileyo kuwe?
Okulandelayo Post:Izikolo ezili-10 eziBalaseleyo zamazwe aphesheya eSwitzerland